चिसो मौसममा तातो चियाको व्यापार -
१३ डिसेम्बर /
साथीभाइसँगको भेटघाट, पाहुनाको स्वागतमा मात्र होइन चिसोमा ज्यानलाई तातो बनाउन पनि धेरैले चिया नै खोज्छन् र पिउँछन् । धेरै चिया पिउँदा स्वास्थ्यलाई बेफाईदा गर्छ भन्नेहरू पनि छन् । तर दिनमा एक वा दुई कप चिया पिएमा हृदयघातबाट बचाउनको लागि सहयोग गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार हरियो चियाको प्रयोगले शरीरको तौल घटाउनुको साथै शरीर स्वस्थ र चुस्त राख्न मद्दत पुग्छ । यसको सेवनले घामबाट आउने परावैजनी किरणले छालालाई गर्ने असर पनि कम गर्छ । हरियो चियाको सेवनले चिनी रोगीलाई पनि फाइदा पुग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । तर धेरै चिया सेवनले भने स्वास्थ्यलाई बेफाइदा पनि पुर्याउँछ ।
पारखीहरू बढ्दै जाँदा चियाको व्यापार पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि नेपाली चियाको माग बढ्न थालेको व्यापारीहरू बताउँछन् । नेपालमा उत्पादन भएको चिया ८५ प्रतिशत बाहिरी मुलुकमा निर्यात हुन्छ भने बाँकी नेपाली बजारमा नै खपत हुने गरेको छ ।
कस्तो छ उत्पादन ?
हाल नेपालमा दुई प्रकारको चिया उत्पादन हुने गरेको छ । सिटीसी (दानदार चिया ) र अर्थाेडक्स (हरियो पत्ति) चिया हो । गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा यसवर्ष चिया निर्यात बढेको छ ।
यस आर्थिक वर्ष ०६९÷०७० झण्डै २९ प्रतिशतले चिया निर्यात बढेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्दले जनाएको छ । अहिले नेपाली बजारमा नै उत्पादन भएका चियामध्येमा सिटीसी र अर्थाेडक्स ब्राण्डका चिया उपलब्ध छन् । सिटीसी चियाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार राम्रो लिएको नेपाल चिया एसोसिएशनका अध्यक्ष रमेश पौडेल जानकारी दिनुभयो ।
यसवर्ष चिया उत्पादन बढ्नुको साथै डलरको मूल्यमा भएको उतारचढावको कारण निर्यात बढेको हुन सक्ने चिया तथा कफी विकास बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत प्रेम आचार्य बताउनु हुन्छ । सिटीसी चिया १० हजार हेक्टर जमिनमा र अर्थाेडक्स चिया ६ हजार ५० हेक्टर जमिनमा खेती हुने गरेको तथ्याङ्क छ । सिटीसी चियाको व्यवसायिक खेती झापामा मात्र हुने गरेको छ । अर्थाेडक्स चियाको व्यवसायिक खेती चाहिँ इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटा लगायत पाँच जिल्लामा हुने गरेको छ ।
सिटीसी चिया तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ भने अर्थाेडक्स चिया भारत र पाकिस्तानमा मात्र निर्यात हुन्छ । हाल नेपाली बजारमा सिटीसी चियाको मूल्य प्रतिकेजी चार सय रुपैंयाँ र अर्थाेडक्स चियाको मूल्य प्रतिकेजी दुई सय रुपैयाँ पर्ने गर्छ । सिटीसी चियाको वार्षिक उत्पादन झण्डै १ करोड ७० लाख केजी र अर्थाेडक्स चियाको उत्पादन भने झण्डै ४० लाख केजी हुने गरेको चिया एसोसिएशनका अध्यक्ष पौडेल बताउनु हुन्छ । नेपालमा निजी स्तरबाट ४० वटा चिया प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छन् ।
यस व्यवसायबाट प्रत्यक्ष रुपमा झण्डै एक लाख जनाले रोजगारी पाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपाल सरकारले चिया किसानको लागि विरुवामा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । दुई वर्षदेखि नेपाली चियाले व्यापारिक लोगोको लागि पहल गरेपनि सफल हुन सकेको छैन । नेपाली चियाले व्यापारिक लोगो प्राप्त गरेमा निर्यात बढ्ने व्यापारीहरू बताउँछन् ।
संरक्षण र प्रचार–प्रसार अभावले चिलागढ ओझेलमा
रिपोर्ट कमन देवान झापाको सतासीधाम–७ माइधारस्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय तिर्थस्थल चिलागढधाम आवश्यक संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचार–प्रसारको अभावमा दिनदिनै ओझेल पर्दै गएको छ । हिन्दु पौराणिक व्याख्या अनुसार महाभारत... Read More
अन्तर्राष्ट्रिय वुद्धिचाल उपाधि मनिषलाई
नेपाल, दमक ३० डिसेम्बर / सुधन प्रसाई स्मृति तेस्रो धु्रबतारा कप अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि फिडे मास्टर मनिष हमालको पोल्टामा परेको छ । पाँच खेलाडीको समान ७... Read More
Biggest Bhutanese Event in US is almost Ready
Bhutan Darpan; June 1st, 2015. The Bhutanese American Sports Council (BASC) with the coordination of the State Host Committee of Nashville Tennessee, formally announced the ‘Fixture Schedule’ of the... Read More
नेपाल, काठमाडौं ११ डिसेम्बर / सदस्यता वितरण बारे नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिमा विवाद उत्पन्न भएको छ । महासंघको केन्द्रीय निर्णय र मापदण्ड विपरीत तथा विधान विपरीत... Read More